Buy Suzuki . Shooter . Efi . 1.. 13model .W. (480,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
Suzuki . Shooter . Efi . 1.. 13model .W.
ရောင်းချသူ: Aung Tayza
ကြည့်သူအရေအတွက်: 371 (+1)
Suzuki . Shooter . Efi . type ဖြစ်​တဲ့အတွက်​ . ပထမအချက်​က​တော့ ဆီစားသက်​သာပါတယ်​ .. အင်​ဂျင်​သံ လုံးဝအငြိမ်​ပါ . အင်​ဂျင်​​ဂျောတင်းပါတယ်​ .. ​သူ့ Error က ​မိုင်းလစ်​ မတက်​ပါဘူး . ​နောက်​မီးလုံးကွဲ​နေပါတယ်​ ..ကျန်​တာ All Fine ပါတယ်​ ..လက်​တင်​စီးပါ . လက်​ရှိလဲ ကျ​နော်​ စီး​နေတာပါ .. ​ရှေ့ဘီး​လဲဖို့ပဲလိုတာပါ . ကျန်​တာ All fine ပါတယ်​ .. ​ဈေးကလဲ တရုတ်​သာသာပါ .. တန်​ပါတယ်​ . ph. 788215740
အမည်: Suzuki . Shooter . Efi . 1.. 13model .W.